Piwik: Isha Furan Falanqaynta Websaydhka | Martech Zone
Piwik: Furan Ilaha Falanqaynta Websaydhka
Khamiis, May 8, 2014 Khamiista, Noofembar 6, 2014 Douglas Karr
Piwik waa furan Analytics madal ay hadda isticmaalaan shakhsiyaad, shirkado iyo dawlado adduunka oo idil. Iyadoo Piwik, xogtaadu had iyo jeer waxay noqon doontaa adiga. Piwik wuxuu bixiyaa noocyo adag oo astaamo ah oo ay kujiraan warbixinada istaatistikada caadiga ah: ereyada muhiimka ah iyo matoorada raadinta, websaydhyada, cinwaanada sare ee URLs, cinwaanada bogga, wadamada isticmaala, bixiyeyaasha, nidaamka hawlgalka, suuq galka shabakada, xalinta shaashadda, desktop VS mobile, hawlgelinta (waqtiga goobta , bogagga booqashada, booqashooyinka soo noqnoqda), ololayaasha ugu sarreeya, doorsoomayaasha gaarka ah, bogagga gelitaanka / bixitaanka sare, faylasha la soo dejiyey, iyo qaar kaloo badan, oo loo kala saaray afar Analytics ka soo warbixi qaybaha - Soo-booqdayaasha, Waxqabadka, Soo-gudbiyeyaasha, Yoolalka / ganacsiga (30 + warbixinno).
Piwik wuxuu kaloo bixiyaa adeegyo xirfadeed iyo xal martigelin loo yaqaan Piwik Pro meesha tusaalahaaga Piwik lagu martigaliyo laguna maamulo daruurta. Halkan waa kuuboon ku xiran 30% KA HEL 6 bilood oo lacag ah dhammaan qorshooyinka daruuriga ah ee Piwik Cloud.
Tilmaamaha Falanqaynta Webka Piwik
Cusbooneysiinta xogta waqtiga dhabta ah - U fiirso socodka waqtiga dhabta ah ee booqashooyinka websaydhkaaga. Ka hel aragti faahfaahsan booqdayaashaada, bogagga ay booqdeen iyo yoolalka ay kiciyeen.
Dashboardka la adeegsan karo - Abuur dashboorro cusub oo leh qaab-u-fidinta widget oo ku habboon baahiyahaaga.
Dhamaan Bogagga Shabakadaha - Habka ugu fiican ee lagu heli karo dulmar guud waxa ka dhacaya bogaggaaga oo dhan hal mar.
Evolution Row - Xogta metric ee hadda & la soo dhaafay ee saf kasta oo warbixin kasta ah.
Falanqaynta e-commerce - Faham oo hagaaji meheraddaada internetka adigoo u mahadcelinaya e-commerce oo horumarsan Analytics muuqaalada.
Raadinta yoolka raadinta - La soco isbeddelada gaarka ah oo caddee haddii aad buuxineyso ujeeddooyinkaaga ganacsi ee hadda jira.
Raadinta Dhacdada - Ku cabir isdhexgal kasta oo ay isticmaalayaashu ku leeyihiin shabakadahaaga iyo barnaamijyadaada.
Falanqaynta Goobta Goobta - Raadinta raadinta lagu sameeyay mashiinkaaga gudaha.
Goolasheynta - Meel ku hel martidaada si loo ogaado saxda ah Dalka, Gobolka, Magaalada, Ururka. Eeg tirakoobka martida ee Khariidadda Adduunka ee Wadan, Gobol, Magaalo. Ku arag martidaadii ugu dambeysay waqtiga dhabta ah.
Kala-guurka Bogagga - Eeg waxa booqdayaashu sameeyeen kahor, iyo kadib markaad fiirisay bog gaar ah.
Bog Dusha - Ku muuji tirakoobyada tooska ah dusha websaydhkaaga dusha sare ee casriga ah.
Xawaaraha bogga & warbixinnada xawaaraha bogagga - Waxay la socotaa sida ugu dhakhsaha badan ee websaydhkaagu u gaadhsiiyo waxyaabaha ku soo booqda martidaada.
Lasoco isdhexgalka isticmaaleyaasha kaladuwan - Raadinta otomaatiga ah ee soo dejiso faylka, guji xiriiriyeyaasha shabakadaha dibadda, raad raac ikhtiyaari ah Bogagga 404
Raadinta ololaha falanqaynta - Si otomaatig ah ayuu u ogaadaa xuduudaha ololaha Google Analytics ee URL-yadaada.
Raadinta taraafikada makiinadaha raadinta - In kabadan 800 oo matoorada raadinta oo kaladuwan ah ayaa lasocday!
Warbixinta emaylka la qorsheeyay (warbixinnada PDF iyo HTML) - Ku dheji warbixinnada barnaamijkaaga ama boggaaga (40 + Widgets are available) ama ku dheji PNG Graphs bog kasta oo caado ah, emayl, ama app ah.
Faahfaahin dheeraad ah - Abuur qoraalada qoraalka garaafyadaada, si aad uga xasuusato dhacdooyinka gaarka ah.
Ma jiro xad xaddidan - Waad haysan kartaa dhammaan xogtaada, iyada oo aan lahayn xaddidno kaydinta, weligiis!
Tags: ilo furanfalanqaynta isha furanfuran shabakadaha falanqayntaPiwikpiwik proAnalytics web
Sida Loo Dhiso Faneel Suuqgeynta Baraha Bulshada